ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali beBhola eKhatywayo baseBelgian I-Youri Tielemans Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football genius eyaziwayo "Abafundi". I-Ourri Tielemans Indaba yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethe iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yentsapho, ubomi bomntu, iinkcukacha zeentsapho, indlela yokuphila kunye nezinye izinto ezinokuthi aziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamanyathelo akhe amabini kunye nezibhamu ezibulalayo. Nangona kunjalo ke bambalwa abajonga i-Youri Tielemans 'Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwe-ado, masiqale.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, UOri Marion A. U-Tielemans Wazalwa ngosuku lwe-7th ka-Meyi 1997 eSint-Pieters-Leeuw, eBelgium. Wazalelwa kobawo ovela kwiNtshonalanga kunye nomama waseCongo.
U-Youri Tielemans wazalelwa kubazali abancinci abakwaziyo. Imivuzo: PXhere kunye ne-YoungStarlets.
Izwe laseBelgium lohlanga oluxubekileyo kunye neengcombolo zaseAfrika naseJamani zaphakanyiswa e-Sint-Pieters-Leeuw ngaphandle kweBrussels apho yakhula kunye nomzalwana nodade osekhulile ongaziwayo malunga nexesha lokubhala.
U-Youri Tielemans wakhuliswa eSint-Pieters-Leeuw ngaphandle kweBrussels, eBelgium. Imivuzo: i-YoungStarlets ne-ViaMichelin.
Ukukhula kwindawo yakhe yokuzalwa, amaTelem asemncinci ayengummangaliso kwintsapho yakhe ngenxa yokuba abazali bakhe kunye nabantakwabo babenomdla kakhulu abathandekayo beJudo abazange banakekele ngebhola.
Nangona amaTelem afumana uqeqesho oluninzi kwi-Judo, ibhola yebhola yilapho intliziyo yakhe yayinayo. Waqala ukudlala le midlalo kungekudala emva kokuba efunde ukuhamba kwaye kungekudala wathola inkxaso yabazali bakhe ababhalise kwi-Anderlecht academy xa eneminyaka emihlanu.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ngethuba e-Anderlecht academy, abafundi baseTelem bahlangene ngokuzibandakanya ngemisebenzi ekwenzeni ibhola ekhatywayo. Nanini na amaTelewa abuzwa ukuba abhale isicatshulwa ngekamva lakhe umfana wayeya kuhlala ebhala phantsi kwimibono yakhe malunga nebhola kunye neenkcukacha zakhe iimpawu ezazisenza iphupha lakhe.
U-Youri Tielemans uya kuhlala ebhala ngekamva lakhe kwibhola ngexesha lokuqala kweentsuku zakhe zesikolo. Imivuzo: Pinterest kunye ne-YoungStarlets.
Ngokungafani nabaninzi bebhola bebhola, ama-Tielemans pursuing academic did not stop in the middle of adolescence. Waqhubeka nokufumana idiploma yesikolo esiphakeme eSint-Guido Institute School eAnderlecht apho wafunda khona urhwebo.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Ubomi bokuqala bokuPhila kunye neNdlela yoLwazi lweNdaba
Ukuqhayisa phakathi kwabafundi kunye nokudlala ibhola ye-Anderlecht akuzange kube lula kumaTele. Nangona u-Anderlecht unciphisa iintsuku zokuqeqesha ama-Tielem ekufuneka ayenze, ukuphuhliswa kwakufuneka ukuba ibhola lebhola liza kufuneka lisebenze nzima ukwenzela ukuba lithandane neontanga ezingabikho uqeqesho.
Nangona kunjalo, abazalwana bawunqoba imingeni ngokunyuka kwiinqanaba. Ngethuba liTyelmans lalingama-16 elidala kwi-2013, waqala ukubizela e-Anderlecht ephezulu njengeqela elingasetyenzisiweyo ngexesha leeklabhu ze-1-0 ukunqoba iGenk kwi-2013 Super Cup Cup.
U-Youri Tielem waqala ukubiza umnxeba we-Anderlecht xa ekhulile i-16. Iingxowa: i-YoungStarlets.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Ukuphakama Kwigama leNdaba
Kwiveki emva kokufumana umnxeba wakhe wokuqala kwiqela eliphezulu, uTielemans wenza iqela lakhe lokuqala lokuqala le-Anderlecht njengengxenye esikhundleni somdlalo wakhe kunye noLokeren kwinqanaba lokuqala leBelgium Pro League.
Ngaphambili, abaTele baba ngumdlali omncinci kumlando weligi. Waya phambili ukubeka enye irekhodi ngokuba ngumdlali osemncinci waseBelgium ukuba adlale kwi-UEFA Champions League emva kokuba eqaliswe kumdlalo olwaMoses ne-Olympiacos kwiminyaka eyi-16 kunye neentsuku ze-148 ngo-2 Oktobha 2013. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
U-Youri Tielem on action against Olympiacos ngexesha lakhe UEFA ekuqaleni. Ikhredithi: iPralala.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Ubuhlobo boBomi boBomi
U-Youri Tielemans utshatile ngexesha lokubhala. Sikuzisa iinkcukacha malunga nomlando wakhe wokuthandana nomtshato wobomi. Ukuqala, amaTele awaziwa ukuba nawo nawaphi intombi ngaphambi kokudibana nomkakhe uMendy.
Wenari Tielemans nomkakhe uMendy. Credit: InformationCradle.
Akuncinci owaziwayo xa iibini zidibana okanye zitshatile. Nangona kunjalo, umanyano wabo usikelelwe ngentombi enhle uMelina. Wazalelwa kumdlali xa wayeyiminyaka eyi-19 ubudala kwi-2017.
Wenari Tielemans nentombi yakhe uMelina. I mboleko: Tumblr
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Ubomi beNtsapho
Abalingani bavela kwimvelaphi yentsapho ephakathi. Sikuzisa iinkcukacha ngobomi bentsapho.
Ubaba kaTielem: Abazali bazalwa ngumzala waseFlemish. Imbali ka-ntambama eyaziwayo ibandakanya ukukhonza njengomfundisi kunye nomfundisi weJudo. Akaqinisekanga ngokusondeleyo kumaTielem othetha ngaye ngezibane ezilungileyo.
Ngomama waseTielemans: Umama wamaTiele ungumzali waseCongo. Njengomyeni wakhe, usebenza njengomfundisi kunye nomqeqeshi weJudo. Eyaziwa ngokuba yingqobhoko yemfundo, unina ongumzali onomdla uncinci malunga nebhola kwaye uqinisekise ukuba isigatya ngokuphathelene nokuphila kwakhe esikolweni sasifakwe kwisivumelwano sokuqala asayine kunye noAnderlecht.
U-Youri Tielemans wakhuliswa ngabazali abancedisayo. Imivuzo. ClipArtsStudio kunye Asmonaco.
Ngabantakwabo baseTielem: Akukho nto eyaziwa ngabazalwana bakaTielem noodade abaye bahamba ngeendlela zabazali babo xa beqhuba iJudo. Nangona kunjalo, babelana nobudlelwane obusondeleyo kunye nomntakwabo onyana oye wazimisela njengomdlali webhola lebhola.
U-Youri Tielemans Abantakwabo babandakanyeka ngokunyanisekileyo kwiJudo. Imboleko: IMGBIN.
Malunga namaTelwane: Ukusuka kwintsapho yasekhaya yaseTielem encinci iyaziwa ngootatomkhulu kayise kunye nonina nomama omama. Ngokufanayo, akukho zirekhodi zabamalume baka-Tielekazi, oomama, oomama kunye nabazala bakhe ngoxa abazala bakhe bengabonakali kwiziganeko eziphawulekayo zobomi bakhe bade bade baqala.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Iinkcukacha zobomi bomntu
Yintoni eyenza u-Youri Tielemans ukhawule? Hlala emva nje ngokuba sikulethele iimpawu zobuntu bamaTelem ukukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo. Okokuqala, i-Tielemans 'persona yinto ehambelana ngayo neTaurus Zodiac.
Ukwazisa, u-ambitious, ulandelelana kwaye akabonakalisi iinkcukacha ezichaphazela ubomi bakhe abucala kunye nobucala. Unomdla kunye nezinto ezithandwayo ezibandakanya ukuqhuba i-judo, ukudlala i-basketball, ukuthenga, ukuphulaphula umculo, ukubukela umabonwakude, ukudlala imidlalo yevidiyo nokuxhoma kunye nabahlobo.
Ukusebenzisa i-Judo ngenye yezinto zika-Youri zeTeelem's activitiestime. Credit: LeSoir.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Lifestyle Facts
U-Youri Tielemans net-worth is still under review. Nangona kunjalo, unexabiso lentengo ye-£ 19.80m ngexesha lokubhala. Imvelaphi yabaseTieleya ubuncwane obuthathaka obuninzi buvela kwimvuzo ayifumana njengebhola lebhola yebhola kunye neengeniso ezivela kwimvume.
Ukuba ngumntu ocekisekisa ingqalelo enkulu, abantu baseTelea baphila ngendlela yokuzimela, ngoko ke akukho nto ininzi eyaziwayo malunga nendlu yakhe yaseSint-Pieters-Leeuw. Ngokumalunga nokuqokelela imoto yakhe, abantu baseTuele baphethe i-Audi yaseNtsundu baza bathabatha isithunzi kufuphi nemoto engaphandle.
U-Youri Tielemans ungumnikazi we-Audi phakathi kwezinye iinqwelo ezincinane eziyaziwayo. I mboleko: Instagram.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Ubungqina bendalo
Ukugubungela ibali lethu labantwana be-Tielemans kunye ne-biografi apha zingamaqiniso angabonakaliyo aqhelekanga afakwe kwi-bio yakhe.
U-Youri Tielemans unobhanqa obomvu kwiJudo. Wayenamazinga amabini nje ukusuka ekufumaneni ibhande elimnyama ngaphambi kokuyeka umdlalo.
Unomboniso omncinci kwi-underside ye-bicep yekhohlo.
I tattoo yaTyri Tielemans ingaphantsi kwebicep yakhe yekhohlo. I-Credit: WTFOOT.
Incinci iyaziwa ngonqulo lwamaTielem njengoko umgcini ongeyathethi ngeenkolelo zakhe ngexesha lokubhala.
Abalingani abazange babonakale bephuza, akanikanga ukutshaya njengoko ngexesha lokubhala.
I-Youri Tielemans Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Isishwankathelo seVidiyo
Nceda ufumane apha ngezantsi, i-video yethu ye-YouTube Isishwankathelo sale fayile. Ngomusa Ukutyelela nokuBhalisa lethu Isiteshi se Youtube iiVideos ezingaphezulu.
QHUBEKA: Siyabulela ngokufunda i-Youri Tielemans Story Story yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts. Ku LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.